I-blockchain -Ikamva leTekhnoloji yezeMali Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 2, 2019 NgoLwesibini, Aprili 2, 2019 UKenneth Evans
Amagama e-cryptocurrency kunye ne-blockchain ngoku afumaneka kuyo yonke indawo. Ingqwalaselo yoluntu enjalo inokuchazwa ngezinto ezimbini: iindleko eziphezulu zeBitcoin cryptocurrency kunye nokuntsokotha kokuqonda eyona nto itekhnoloji. Imbali yokuvela kwemali yokuqala yedijithali kunye netekhnoloji ye-P2P engaphantsi iya kusinceda siziqonde ezi "hlathi ze-crypto".
Zimbini iinkcazo zeBlockchain:
Ulandelelwano oluqhubekayo lweebhloko eziqukethe ulwazi.
• Iziko ledatha elisasaziweyo eliphindiweyo;
Zombini ziyinyani kubume bazo kodwa aziniki mpendulo kumbuzo wokuba iyintoni na. Ukuqonda okungcono kwetekhnoloji, kuyafuneka ukuba ukhumbule ukuba zeziphi iindlela zokwakha zenethiwekhi zekhompyuter ezikhoyo kwaye zeziphi kuzo ezilawula intengiso yeenkqubo ze-IT zale mihla.
Zizonke zimbini iindidi zoyilo:
Inethiwekhi yomncedisi wabathengi;
Ukunxibelelana ngendlela yokuqala kuthetha ukulawulwa okuphakathi kwayo yonke into: usetyenziso, idatha, ukufikelela. Yonke ingcinga yenkqubo kunye nolwazi zifihliwe ngaphakathi kwiseva, nto leyo inciphisa iimfuno zokusebenza kwezixhobo zabaxhasi kunye nokuqinisekisa isantya esiphezulu sokuqhubekeka. Le ndlela ifumene ingqalelo enkulu kule mihla yethu.
I-peer-to-peer okanye i-network ezinikezelweyo azinaso isixhobo esikhulu, kwaye bonke abathathi-nxaxheba banamalungelo alinganayo. Kule modeli, umsebenzisi ngamnye ayisiyomsebenzisi nje kuphela kodwa ukwangumboneleli ngenkonzo.
Inguqulelo yokuqala yoqhakamshelwano lwontanga yi-USENET yasasaza inkqubo yemiyalezo ephuhliswe ngo-1979. Iminyaka engamashumi amabini ezayo yaphawulwa ngokwenziwa kwe-P2P (Peer-to-Peer) - izicelo kumacandelo ahluke ngokupheleleyo. Omnye wemizekelo edume kakhulu yinkonzo yeNapster, inethiwekhi ekwabelwana ngayo ngoontanga, okanye i-BOINC, iqonga lesoftware yokusasaza ikhompyuter, kunye neprotocol yeBitTorrent, sisiseko sabathengi bale mihla.
Iinkqubo ezisekwe kuthungelwano olusasazwayo ziyaqhubeka ukubakho, kodwa ngokuphulukana nokuphulukana nomncedisi womthengi kubukho nokuthobela iimfuno zabathengi.
Uninzi lwezicelo kunye neenkqubo zokusebenza okuqhelekileyo zifuna ukukwazi ukusebenzisa iseti yedatha. Zininzi iindlela zokucwangcisa loo msebenzi kwaye enye yazo isebenzisa indlela yoontanga. Iinkcukacha ezihanjisiweyo, okanye ezifanayo, ziyahlukaniswa yinto yokuba ulwazi oluyinxalenye okanye olupheleleyo lugcinwe kwisixhobo ngasinye senethiwekhi.
Enye yeenzuzo zenkqubo enjalo kukufumaneka kwedatha: akukho ndawo inye yokusilela, njengoko kunjalo kwindawo yogcino lwedatha ebekwe kwiserver enye. Esi sisombululo sinezithintelo ezithile kwisantya sokuhlaziya idatha kunye nokuzihambisa phakathi kwamalungu enethiwekhi. Inkqubo enjalo ayizukumelana nomthwalo wezigidi zabasebenzisi abasoloko bepapasha ulwazi olutsha.
Itekhnoloji ye-blockchain ithatha ukusetyenziswa kwedathabheythi esasaziweyo yeebhloko, eziluluhlu oludibeneyo (ibhloko nganye elandelayo inesazisi sangaphambili). Ilungu ngalinye lenethiwekhi ligcina ikopi yayo yonke imisebenzi eyenziweyo ngalo lonke ixesha. Oku ngekhe kwenzeke ngaphandle kwezinto ezintsha eziyilelwe ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokufumaneka kwenethiwekhi. Oku kusizisa kwi-blockchain yokugqibela "yeentsika" - i-cryptography. Kuya kufuneka unxibelelane ne Inkampani yokuphuhlisa isoftware ukuqesha abaphuhlisi be-blockchain ukudibanisa obu buchwephesha kwishishini lakho.
Emva kokufunda izinto eziphambili kunye nembali yokudala itekhnoloji, lixesha lokuba ekugqibeleni ususe intsomi enxulunyaniswa negama elithi "blockchain". Cinga ngomzekelo olula wotshintshiselwano lwemali yedijithali, umgaqo wokusebenza kwetekhnoloji ye-blockchain ngaphandle kweekhompyuter.
Masithi sineqela labantu abali-10 abafuna ukubanakho ukwenza imisebenzi yokutshintsha kwemali ngaphandle kwenkqubo yebhanki. Cinga ngokulandelelana ngezenzo ezenziwa ngabathathi-nxaxheba kwinkqubo, apho i-blockchain iyakumelwa ngamaphepha aqhelekileyo:
Umthathi-nxaxheba ngamnye unebhokisi apho aya kongeza khona amaphepha kunye nolwazi malunga nayo yonke imisebenzi egqityiweyo kwinkqubo.
Umthathi-nxaxheba ngamnye uhlala nephepha kunye nepeni kwaye ukulungele ukurekhoda yonke imicimbi eya kwenziwa.
Ngexesha elithile, inombolo yenxaxheba 2 ifuna ukuthumela iidola ezili-100 kwinombolo ye-9.
Ukugqibezela intengiselwano, uMthathi-nxaxheba onguNombolo 2 uxela wonke umntu: "Ndifuna ukutshintshela iidola ezili-100 ziye ku-Nombolo 9, ke yibhale kwiphepha lakho."
Emva koko, wonke umntu ujonga ukubona ukuba ngaba uMthathi-nxaxheba 2 unemali eseleyo yokugqibezela intengiselwano. Ukuba kunjalo, wonke umntu wenza inqaku malunga nentengiselwano kumaphepha abo.
Emva koko, intengiselwano ithathwa njengegcweleyo.
Ixesha elingaphezulu, abanye abathathi-nxaxheba kufuneka benze imisebenzi yotshintshiselwano. Abathathi-nxaxheba bayaqhubeka nokwazisa kunye nokurekhoda intengiselwano nganye eyenziweyo. Kumzekelo wethu, ukuthengiselana oku-10 kunokurekhodwa kwiphepha elinye, emva koko kuyimfuneko ukubeka iphepha elizalisiweyo ebhokisini kwaye uthathe entsha.
Ukongeza iphepha kwiBhokisi
Into yokuba iphepha libekwe ebhokisini lithetha ukuba bonke abathathi-nxaxheba bayavumelana nokunyaniseka kwayo yonke imisebenzi eyenziweyo kunye nokungenzeki kokutshintsha iphepha kwixesha elizayo. Yiyo le eqinisekisa ukuthembeka kwayo yonke intengiselwano phakathi kwabathathi-nxaxheba abangathembani.
Inqanaba lokugqibela yimeko ngokubanzi yokusombulula ingxaki yeenjengele zaseByzantine. Kwiimeko zokunxibelelana kwabathathi-nxaxheba abakude, abanye babo abanokuba ngabangeneleli, kufuneka ufumane isicwangciso esiphumelelayo sabo bonke. Inkqubo yokusombulula le ngxaki inokujongwa kwi-prism yeemodeli zokhuphiswano.
Kwintsimi yezixhobo zemali, i-Bitcoin, ekubeni yeyokuqala kwi-cryptocurrency, ngokuqinisekileyo ibonise indlela yokudlala ngemithetho emitsha ngaphandle kwabalamli nolawulo oluvela phezulu. Nangona kunjalo, mhlawumbi eyona nto ibaluleke ngakumbi yokuvela kweBitcoin yayikukudala itekhnoloji ye-blockchain. Nxibelelana neenkampani zophuhliso lwe-blockchain zokuqesha abaphuhlisi be-blockchain ukudibanisa obu buchwephesha kwishishini lakho.
tags: blockchainukuphuculwa kwebhlokoIteknoloji ye-blockchainItekhnoloji yezeMali